Fiofanana nataon’ny mpiasan ‘ny « fitantanan-draharahan’ny fitsinjaram-pahefana » eto anivon ‘ny Antenimierandoholona niarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka FES tany Antsirabe – Sénat de Madagascar
Fiofanana nataon’ny mpiasan ‘ny « fitantanan-draharahan’ny fitsinjaram-pahefana » eto anivon ‘ny Antenimierandoholona niarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka FES tany Antsirabe
March 9, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Notontosaina tany Antsirabe « Imperial Hotel» ny 27, 28 Febroary ary ny 01 Martsa 2019 lasa teo, ny fiofanana fampitomboana ny traikefa eo amin’ireo mpiasan’ny Fitantanan-draharaha misahana ny Fitsinjaràm-pahefana eo anivon’ny Antenimierandoholona. Fiofanana natao teo ambany fitarihan’Andriamatoa RANDRIANAMBININA Christiansenn Robert Talen’ny fitantanan-draharaha miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana.
Izao fiofanana izao dia fiaraha-miasa eo amin’ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES na ny « Fondation Friedrich Ebert Stiftung » notarihin’Andriamatoa John MIANDRARIVO sy ireo mpiara-miasa aminy, ary mpiasa miisa 31 avy amin’ny Antenimierandoholona no nandray anjara tamin’izany.
Fiofanana niompana indrindra amin’ny rafitra fanatanterahana ny asa eo anivon’ity fitantanan-draharaha ity, izany hoe miainga amin’ny « Méthodologie d’enquête » sy ny « Collecte de données sur terrain », ny fampidirana sy ny fikirakiràna azy ho azo trandrahana ao amin’ny solosaina, ny «initiation à l’Excel, initiation à l’Access », ary ny fomba itehirizana ireo antontan-kevitra.
Nandritra ity fiofanana ity ihany koa no namolavolana ireo fanontaniana entina manao fanadihadiana eny ifotony mba ahazahoan’ireo mpiofana ny mombamomba ireo Kaominina eo amin’ny lafiny ara ekonomia, sosialy, ary ny fitantanan-draharaham-panjakana ankapobeny; ka ny vokatr’izany fanadihadiana izany no ahafahan’izy ireo mamakafaka sy manoro hevitra ireo Loholona amin’ny maha mpiahy ny vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ireto farany.
Nomarihin’Andriamatoa MIANDRARIVO John solontenan’ny FES fa izao no natao dia ny hisian’ny traikefa haha-matihanina eo amin’ny fanatanterahana ny asa.
Ho fanohizana ny fiaraha-miasa eo amin’ny FES na ny « Fondation Friedrich Ebert Stiftung » sy ny Antenimierandoholona dia mbola hitohy ny fanofanana ho an’ireo mpiasa any amin’ny Fitantan-draharaha hafa eto amin’ity Andrimpanjakana Faharoa ity mialohan’ny fiatrehana ny Fivoriana ara-potoana Voalohan’ny Antenimierandoholona manaraka.